Yakarongwa obsolescence: iyo hunyengeri kuitira kuti iwe ushandise yakawanda ... | Mahara emahara
Yakarongwa obsolescence: iyo hunyengeri kuitira kuti iwe ushandise yakawanda ...
La kurongwa kushaya nguva chinhu chinoshamisa icho vatengi vanoziva uye vanotya. Asi, kunyangwe chiri chakavanzika chakavhurika, pachine chakavanzika chakawanda. Uye zvakare, vagadziri vemarudzi ese ezvigadzirwa nemasevhisi vakakuita hunyanzvi hwekuwana mamwe mabhenefiti pakurasikirwa kwevatengi vachifanira kuita tsiva zvishandiso zvako nenzira inokurumidza.
Ichi inotakura matambudziko akati wandei, kwete chete iyo yehupfumi yekumanikidza vashandisi kuisa mari mukutenga zvigadzirwa zvitsva. Izvi zvakare zvinoreva kumwe kuipira kwakashata, sekugadzira huwandu hwakawanda hwezvisi uye marara izvo zvisingabatsire zvachose kune yakagadzikana uye inochengetedza nharaunda.
1 Chii chakarongwa kusakwana?
2 Mhando dzekurongwa kushaya nguva
3 Zvakanakira nekukanganisa kwakarongwa kushaya nguva
4 Ndezvipi zvikamu zvinokanganisa?
5 Rwisa kurongwa obsolescence
Chii chakarongwa kusakwana?
La kurongwa kushaya nguva Inosanganisira kuburitsa zvinhu zvine hupenyu hupfupi hunobatsira kuitira kuti vatengi vadzokore kutenga iko munguva pfupi. Ichi chakaipa muindasitiri hachisi chitsva izvozvi, kunyange hazvo iko zvino kuri iko kunonyanya kutaurwa nezvako. Yakave yakagadzwa muchikamu kwenguva yakareba. Muchokwadi, chimwe chezvigadzirwa zvekutanga kukanganiswa nechiitiko ichi chaive chekutanga prototypes emagetsi emagetsi naThomas Alva Edison muna 1901.
Edison pachake akagadzira prototype inogara maawa 1500, zvinova zvinobudirira pakutengeswa kwemakambani anotarisira kugadzirwa kwawo. Izvo zvinokwanisika kugadzira akawanda akasimba mababu, zvisinei kuita kudaro kungareva kuti havangatenge zvakanyanya. Iyo Phoebus Cartel yaizogadzirwawo kubvumidza vese vagadziri vanogadzira zvishandiso zvinogara kupfuura maawa chiuru. Zano rese rakabvumirana muchikamu kuti uzadze homwe dzako uye dururire ivo ...
Panguva iyoyo pakanga pasina ruzivo rwezvakatipoteredza, pasina kodzero dzevatengi, saka pasi rese rakatanga kumedza neiyi tsika inogara kusvikira nhasi. Uye zvakare, nhanho nyowani dzaizouya dzeichi chiito, pachinowedzera kune mamwe matunhu mazhinji kusvibisa musika wezvese zvigadzirwa uye kunyange zvinhu zvisingaonekwe kana masevhisi senge software.
Munguva pfupi yapfuura, Apple ndeimwe yemakambani akaomesesa Yakagashirwa nekuda kwekushomeka kwakarongedzwa kwekushandisa kwayo, senge iPod, kana iyo yemamwe maPhones ayo, ayo akatokonzeresa zvichemo kubva kune mamwe masangano akadai seOCU.
Mhando dzekurongwa kushaya nguva
Munzira isinganzwisisike uye ingangoita pachena kumushandisi, vagadziri uye vagadziri vane zvese zvakanyatsofungidzirwa kunze kuti vawane mukana wakakura kubva pane zvavanogadzira. Nekudaro, marongero anogona kuve akasiyana kwazvo muchigadzirwa chimwe nechimwe, kutsvaga akati wandei mhando dzekugara dzakarongeka akadai se:
Yakarongwa bhenefsi: ndeimwe inokanganisa mashandiro echigadzirwa chawatenga. Semuenzaniso, inogona kuve kugona kwendangariro kunoramba kuri kudiki uye unofanirwa kutenga yakakura, mashandiro eCPU, simba remota, nezvimwe.
Zvemagariro kana zvepfungwa zvakarongedzwa obsolescence: Inowanikwa kuburikidza nekutengesa, kushambadzira uye nekunyengera kwenzanga. Steve Jobs aive nyanzvi pazviri. Ndiyo imwe inokurudzira vatengi kuti vave nechishandiso chekunzwa kuti ivo chikamu chemagariro, kana kuita mamwe manomano kuitira kuti mushandisi afunge kuti mudziyo wavo watopera uye anofanirwa kuuchinja. Semuenzaniso, kuve ne iPhone sechimwe chic uye chiziviso chechimwe chepamusoro chemagariro.
Inoshanda kana yakasarudzika yakarongedzwa obsolescence: mune ino imwe kesi, yakarongedzwa kusakwana ndiyo inokonzeresa kuti chigadzirwa chitsemuke kana kuora kana nguva yewarandi yapfuura kuitira kuti iwe ugozvitsiva neimwe. Iyo ndeimwe yekupararira kwazvo kwanhasi, uye zvirokwazvo wakanzwa izvo zve «maX haachagari sezvavaimboita«, Kugona kutsiva X dzemotokari, zvishandiso, kana chero ...
Kunanga kusarongeka: Ine hukama neiyo yapfuura, sezvo iri iyo inokutadzisa iwe kubva mukukwanisa kugadzirisa chigadzirwa nekuti hapana zvikamu zvekusiya, nekuti mugadziri anoita kuti zviome kwazvo kugadzirisa, kana nekuti zvikamu zvacho zvinodhura kupfuura kutenga itsva.
Yakarongwa kushaya nguva nekuda kwekusaenderana: inogona kufanana nebhenefiti, asi yakanangiswa mukusaenderana. Semuenzaniso, pavanogadziridza sisitimu inoshanda uye isingatsigire chishandiso uye ichimanikidza kuti utenge imwe nyowani kana iwe uchida kunakidzwa nekuvandudzwa, kana chiteshi chitsva chisingaenderane nezvakamboitika, nezvimwe.
Cherekedza Kupera: inowanzo kuve kazhinji mumaprinta kana multifunction, kana mudziyo uchinyevera kuti inki cartridges kana toners haachashandi kana kuda kuchinjwa, kana kuti vamwe vanochenesa ingi musoro vari kugadzirira kumira kushanda mushure menguva yakati, inogadziridza firmware inokumanikidza kumira kushandisa zvimwe zvinowirirana zvinoshandiswa, nezvimwe.
Zvepanyama kusakara: pavanokuita kuti utenge chimwe chigadzirwa chitsva icho chinonzi chinogadzikana, chinopa simba uye chinogarisana nharaunda. Uye pamwe ndizvo zvazviri, asi zvinogona zvakare kuitika kuti kuzvitsiva kunounza matambudziko akawanda kupfuura kugadzirisa, semuenzaniso, kugadzira e-marara kana marara emagetsi. Pamusoro pezvo, izwi iri rakanangana nekuwachisa girini kana kugezesa kumeso uko makambani mazhinji anoda kunyepedzera ...
Mamwe matunhu Zvakasiyana nehardware nesoftware, zvakare vane zvimwe zvisakanaka, senge aesthetics yemafashoni neyekushambadzira indasitiri, nekuda kwekunakisisa zuva risati rasvika kana zuva rekupera kwechikafu kana mushonga, nezvimwe.
Zvakanakira nekukanganisa kwakarongwa kushaya nguva
Chaizvoizvo zvakarongwa kusakwana kune zvishoma kana kuti kwete kubatsirwa nevatengi. Zvinongounza dambudziko kwaari. Zvakanakira izvi ndezve chete makambani anotengesa zvinhu izvi, nekuti ndiwo anobatsira kana iwe uchifanira kutenga zvishandiso zvitsva kubva kwavari. Ndokureva, chinangwa chayo chega purofiti yehupfumi.
Zvisinei, izvo zvinounza zvinetso yakakosha izvo zvinobva mutsika iyi, se:
Iko kukanganisa kune hupfumi hwevatengi.
Chizvarwa chehuwandu hwakawanda hwe-e-marara kana emagetsi marara (uye mamwe marudzi emarara uye akawanikwa marara) ayo anosvibisa kana asingazopedzisi achidzokororwazve.
Kukura kukuru, izvo zvinoreva kushandiswa kweakawanda zviwanikwa uye indasitiri isingagadzirisike.
Ndezvipi zvikamu zvinokanganisa?
Kurongwa kushaya nguva haingori chete inokanganisa nyika yetekinoroji nyowani, senge Hardware uye software, zvakare mamwe akawanda, senge mota, fashoni, chikafu, iyo indasitiri yemishonga, uye yakareba etc.
Rwisa kurongwa obsolescence
Kurwisa kusarongeka kwakarongwa, kuzvipira kubva kuboka rezvematongerwo enyika kunodiwa kuisa masanctions kune avo vanozviita uye nekudzora kuti zvidzivirirwe kuti zviitwe. Zvisinei, hurumende zhinji dzinombozeza kuzviita nekuda kwekumanikidzwa kwehupfumi kubva kumapoka akasiyana emakambani akanganisa maindasitiri.
Shanduko yemamiriro ekunze uye kuwedzera kwekuziva kwevashandisi kuri kubatsira mamwe maanensi kutanga kugadzira mitemo yekurwisa kupera kurongeka. Nyaya yeiyi ndiyo European Union, iyo yakagadzira akateedzana emitemo kuti ibatsire vatengi veEurope. Semuenzaniso, wedzera warandi makore, bvumira kugadziriswa kwezvigadzirwa uye gadzira vagadziri kufambisa izvi nema modular dhizaini uye kugadzirwa kwezvipenga zvikamu kwenguva yakareba, kumisikidzwa kwezvimwe zvinhu (semuenzaniso: majaja), kushandiswa kwekunyora kunoratidza kuvimbika kwe zvishandiso kubatsira mutengi kusarudza zvirinani, nezvimwe.
Zvese izvi zvinobatsira kwazvo kune iyo kukanganisa kwezvakatipoteredza uye mukurwisa shanduko yemamiriro ekunze, mukuwedzera pakuita kuti vatengi vave vakavimbika uye vanoponesa mari zvigadzirwa.
Semushandisi Iwe unogona zvakare kuita zvimwe zviito zvinobatsira kurwisa kurongeka kushaya nguva:
Koshesa kutengwa kwezvakavimbika uye modular zvigadzirwa.
Shandisazve zvigadzirwa nekuzvitengesa sechipiri ruoko kana kuzvipa kuti uvape mukana mutsva.
Kudzokorora uye Kurasa Zvakakodzera. Izvi, kunyangwe zvisingabatanidzi zvakananga kurwisa kupera simba kwakarongwa, itsika yakanaka yekudzivirira kuti marara anoguma ashatisa kana mukurasa marara zvisina kukodzera.
Kusimudzira tsika yekushandisa zvine mutsigo, zvese mumagariro uye nharaunda.
Wana zvigadzirwa zvinogonesa kugadzirisa, kungave nezvikamu zvinogona kubviswa kutsiva, kana kubva kune vagadziri vanopa rutsigiro rurefu uye zvikamu zvekusiya.
Chengetedza zvigadzirwa zvako kuwedzera hupenyu hwavo hunobatsira.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Mahara emahara » General » Yakarongwa obsolescence: iyo hunyengeri kuitira kuti iwe ushandise yakawanda ...
Chinyorwa chakanaka kwazvo! Ndatenda!
Ndatenda zvikuru nekuverenga kwedu!
Raspberry Pi vs NAS Servers: Zvese zvaunoda Kuti Uzive
Homemade hologram: maitiro ekugadzira aya mamiririri emifananidzo